Miandry ny Fanisam-bato Farany i Aostralia Raha Mifotitra amin’ny Praiminisitra ‘Fizza’ ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2016 16:01 GMT
Mety hiandry ela i Aostralia sy ny Praiminisitra, Malcolm Turnbull, vao hahafantatra ny vokatry ny fifidianana federaly natao tamin'ny 2 Jolay 2016. Nisolo ny Praiminisitra teo aloha, Tony Abbott, i Turnbull tamin'ny Septambra 2015 taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny Antoko Liberaly. Tokony hahafahany mandresy mora foana amin'ny fifidianana manaraka ny lazany tamin'izany fotoana izany.
Kanefa, ny fanisam-bato natao ny Sabotsy alina dia tsy ahafahana milaza mazava na ny governemanta na ny mpanohitra no nahazo ny maro an'isa tao amin'ny Antenimeram-Pirenena. Ny fifidianana ireo kandidà maro avy amin'ny antoko madinika sy tsy miankina dia midika fa mety hisy parlemanta tsy manana maro an'isa, ary tsy hanana ny maro an'isa na ny ankilany na ny andaniny. Seza enina amby fito-polo amin'ireo 150 no ilaina ahafahana mitondra. Tsy maintsy mahazo ny fitokisan'ny Antenimiera ny praiminisitra, izay hananganana ny governemanta miorina amin'ny rafitr'i Westminster.
Noho ny endrik'i Turnbull omaly alina sy nandritra ny fampielezan-kevitra #ausvotes, mpaminany izay rehetra niaraka tamin'i Fizza LAOLINA!
Fifanarahana ara-politika ataon'ny antoko afovoany-ankavanana’ ny fiaraha-mitantan'ny Liberaly-Nasionaly. Ny Antokon'ny Mpiasa Aostraliana, izay tarihan'i Bill Shorten amin'izao fotoana izao, no tena mpifanandrina aminy.
VAOVAO MAFANA avy amin'ny mpitahiry fomban-drazana: Raha manao fifanarahana hamadika anay ho an'ny tenany i @TurnbullMalcolm, dia afaka manova azy izahay amin'ny fivorian'ny antoko voalohany @abc news
Raha toa ka #miandryiAostralia izay ho fanisam-bato farany sy ny voka-pifidianana, misy ireo reraka amin'ny mpitondra, taorian'ny fampielezan-kevitra lava tsy toy ny mahazatra, naharitra valo herinandro: